Dhaabbata Fayyaa Adduunyaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 14:07 23 Sadaasa 202114:07 23 Sadaasa 2021
Keeniyaan hanqinni kondomii na mudate 'mala biraa fayyadamaa' jette
Qondaalonni fayyaa Keeniyaa hanqinni dhiyeessii kondomii biyyattii waan mudateef uummatni biyyattii tooftaa biraa akka fayyadamaniif dhaaman.
...tti maxxanfame 8:53 17 Sadaasa 20218:53 17 Sadaasa 2021
Dubartiin Arjantiinaa qoricha tokko malee HIV/AIDS irraa fayyite
Dubartiin biyya Arjantiinaa tokko qoricha gosa kamiyyu osoo hin fudhatiin HIV/AIDS irraa fayyuun ishee hedduu ajaa'ibsiisaa jira.
...tti maxxanfame 5:34 12 Sadaasa 20215:34 12 Sadaasa 2021
Dhibeen sukkaaraa maali?, akkamiin ofirraa ittisuun danda'ama?
Addunyaarratti namoonni miliyoona 422 ta'an dhibee sukkaaraa (diabetes) waliin akka jiraatan tilmaama. Lakkoofsi kun bara 1980 kan turerra dachaa afuriin dabaleera. Guyyaa dhibee sukkaaraa addunyaatti waa'ee dhukkubichaa wanti beekuu qabdan kunooti.
...tti maxxanfame 4:08 8 Sadaasa 20214:08 8 Sadaasa 2021
Sooddoo hanga Mishigaan – imala gumaacha fayyaa sammuu Maajii Haaylemaariyaam (PhD)
Dr. Maajii Haaylemaariyaam bara 2016tti Itoophiyaa irraa gara Ameerikaa erga deemtee booda, magaloota Niiw Yoork, Waashingitan DC fi Filaadelfiyaa keessa turteetti. Sana booda bakka amma jiraattu Mishiganitti imalte.
...tti maxxanfame 10:35 30 Onkololeessa 202110:35 30 Onkololeessa 2021
Tediroos Adihaanoom biyyoota 28'n kaadhimamuun marroo lammataaf WHO hoogganuuf
Hoogganaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Teediroos Adihaanoom marroo lammataaf dhaabbaticha akka hoogganaan filatamuuf fiixeerra gahaniiru.
...tti maxxanfame 5:11 21 Onkololeessa 20215:11 21 Onkololeessa 2021
Weerarri Covid bara 2022 keessas ni hammaata jechuun WHOn akeekkachiise
Talaalliin harkifachuun weerarichi kan eegameen olitti dheerachuu akka hin oolle agarsiisa jedhan ogeeyyiin.
...tti maxxanfame 5:51 14 Onkololeessa 20215:51 14 Onkololeessa 2021
'Ka'umsa Covid-19 baruuf carraa isa dhumaa' - WHO
Ka'umsa weerara vaayirasii addunyaa jijjiiree baruuf carraa isa dhumaa kan ta'e garee haarawa ijaaree qorannoo eegaluu WHO beeksise.
...tti maxxanfame 4:17 14 Onkololeessa 20214:17 14 Onkololeessa 2021
Dr Tedroos Itoophiyaatti ‘namoonni miiliyoona 7 gargaarsa nyaataa atattamaa barbaadu’ jedhan
Namoonni '400,000 sadarkaa beela jedhamuu danda’u keessa jiraachaa jiru kana hogganaan Dhabbata Fayyaa Addunyaa Dr Tedros Adihaanom, namoonni miiliyoona torba tahanis gargaarsa nyaataa atattamaa barbaaduu jedhaniiru.
...tti maxxanfame 6:16 29 Fuulbaana 20216:16 29 Fuulbaana 2021
DR Koongootti hojjettoonni WHO haleellaa saalaa dubartootaan himataman
Yeroo weerara dhukkuba Iboolaa Democratic Republic of Congo’tti, hojjettoota deeggarsaa 83 dubartootarra haleellaa saalaa qaqqabsiisan keessaa hojjettoonni Dhaabbata Fayyaa Addunyaa keessatti argamu.
...tti maxxanfame 9:52 25 Fuulbaana 20219:52 25 Fuulbaana 2021
Page 1 Keessaa 31